Shabaab oo warqado digniin ah ku daadiyey Muqdisho ayaa ku amaraya ragga iyo dumarka ineysan is dhex fariisan xiliga gaadiidka dadweynaha ku safrayaan – idalenews.com
Shabaab oo warqado digniin ah ku daadiyey Muqdisho ayaa ku amaraya ragga iyo dumarka ineysan is dhex fariisan xiliga gaadiidka dadweynaha ku safrayaan
Kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab oo inta badan aan ka talin magaalada Muqdisho balse sameeyo howlgalo qaraxyo iyo dilal qorsheysan ayaa waxay iminka soo saareen amaro iyo digniino ku aadan shacabka Muqdisho.
Sida ay xog ku heshay warbaahinta K24 qaarka mid ah wadooyinka Muqdisho ayaa waxaa lagu soo daadiyey warqado ay ku qoran yihiin amaro ay kooxda Al-Shabaab siinayaan shacabka kuwaasi oo ay ka mid yihiin inaysan raga iyo dumarka baabuurta dadweynaha saaran inaysan dhex fariisan.
Waxaana ku qornaa warqada sidan : Raga iyo dumarka muslimaadka ah ee Muqdisho degan waxaan uga digeynaa inay is dhex fariistaan xilliyada baabuurta dadweynaha aysaaran yihiin. Taasi diinta alle ma baneyn oo waa laga digay. Ciddii aan arrintaasi joojin oo lagu arko iyagoo is dhex fadhiya waxaanu ku fulin doonaa dilal meelkasta oo ay joogaan. Maxaa yeelay waa kuwa fasaadka jecel: ayaa lagu yiri qoraalka wadooyinka lagu daadiyey ee Al-Shabaab.
Sida muuqata dadweynaha Muqdisho ayaa maanta arrintaasi la qalqalsan,iyagoona badi sheegaya inay ku qasban yihiin u hogaansanaanta goàanka Al-Shabaab. Maadaama bey yiraahdeen kooxdan ay yihiin kuwa aan ka nixin daadinta dhiiga muslimiinta.
Dowlada Soomaaliya ayaa badi Muqdisho ka talisa, waxaana dadka ku xeeldheer siyaasadaha ammaanka ku tilmaameen mid ku fashilantay sugida magaalada iyo ilaalinta shacabka.
Kooxda Al-Shabaab ayaa bishan barakeysan ee lagu jiro waxay fuliyeen weeraro dhowr ah iyo dilalka dad shacab ah. Taasi oo muujineysa inay wali awood ku leeyihiin Muqdisho.
Axmed Davutoglu Wasiir dibadeedka Turkey oo sheegay in mashaariicda dalkiisa ka wado Somalia laba jibaari doonaan, cabsina aysan ka qabin handadaaada Shabaabka